Ungazi njani ukuba ndinefrenulum emfutshane | Amadoda aneSitayile
UAlicia tomero | 31/10/2021 10:08 | Ukunyamekela, Isibini kunye nokwabelana ngesondo
Amadoda amaninzi okanye abaselula uphethwe frenulum emfutshane ngaphandle kokuqinisekiswa kokwazi ukuba banokuzilungisa ngokwabo. Kwabanye kuyimfihlakalo ukwazi ukuba bane-frenulum emfutshane, abafana abaninzi bayafika kwiminyaka yobudala ngokuthandabuza, namanye amadoda aneminyaka eyifihla ingxaki yawo engazi ukuba mawenze ntoni na.
Ngokuxhomekeke kwinqanaba elikhoyo, kunokufuna yonyango oluncinci. Kwinkoliso yezi meko, isonjululwa xa abantwana besebancinane kwaye ifuna kuphela uhlobo oluthile lwekhrimu oko kunceda ukuhoxisa ulusu ukuze lunike kancinci kancinci. Kodwa kwezinye iimeko eziphambili ngakumbi kuya kufuneka utyando.
1 Ndazi njani ukuba ndinefrenulum emfutshane?
2 Kutheni i-frenulum emfutshane isenzeka?
3 Ziziphi iimpawu ezinokuvela
4 Unyango lwe-frenulum emfutshane
5 Iya kuba njani indaleko yayo?
Ndazi njani ukuba ndinefrenulum emfutshane?
Okokuqala kukwazi ukuba uphethwe yi-frenulum emfutshane okanye lolunye uhlobo ingxaki efana nephimosis. Ulusu olujikeleze incanca kufuneka lube luxanduva lokudibanisa zombini ijwabu kunye nelungu lenkantsi kwaye oku kwenziwa ngokugotywa okunceda ukolula kunye nokufinyela.
Xa oku kugotywa okanye i-frenulum imfutshane kakhulu yenza le ntshukumo ingenzeki okanye yenza kube nzima kakhulu, apho xa kuziwa ekubeni ube ne-erection uya kuba nobunzima kwaye ngenxa yoko awuyi kukwazi ukuba neentlobano zesini. Ukuba i-frenulum imfutshane okanye ayikho ilastiki kakhulu Ayiyi kuvumela i-glans ukuba irhoxe ngokupheleleyo, kwaye inokubonwa kuphela xa umthondo uzakuba ume.
Kutheni i-frenulum emfutshane isenzeka?
Oyena nobangela xa kwenzeka phimosis. I-Phimosis xa umngxuma kwijwabu lincinci kakhulu, lincinci, okanye lingekho i-elastic kakhulu ukukhusela i-glans ekuphumeni. Umzamo uya kwenziwa ukuhoxisa ulusu ngasemva kwaye kuya kubakho ubunzima obuninzi, ngoko ke awukwazi ukufumana ukumiswa, kodwa unokuchama ngokugqibeleleyo. Le nyaniso inokunxulunyaniswa ne-frenulum emfutshane.
Ezinye izizathu isenokuba yimvelaphi yemfuza, apho usuka wazalwa ukhule nale anomaly. Kodwa ngamanye amaxesha kunokubakho xa sele kukho izifo zesini (ukuvuvukala okanye i-fibrosis) apho kuye kwakho ukuqina kwezicubu ze-frenulum.
Amanye amadoda, kunye nabantwana okanye abafikisayo basenokuba baye baba nayo ukukrazula kwe-frenulum yaye ekuphilisweni kwayo iye yaphila kakubi. Kwezinye zezi zihlandlo i-frenulum iye yanesiphako okanye yaba mfutshane.
Ziziphi iimpawu ezinokuvela
Kukho izinto ezininzi ezingathandekiyo ezinokuthi zenzeke ngenxa yokuba ne-frenulum emfutshane. Eyokuqala kukuba uzame ukuhoxisa ulusu ngeenzame zokwabelana ngesondo okanye ukuhlaziya i-masturbate, ngoko iya kubangela intlungu.
Kwezinye zezi nzame, ungazama ukugcina ubudlelwane ngokufikelela ukuba kwenzeke inyembezi, ngoko ke kufuneka ihlanjululwe. Kwezinye iimeko ilinge kukuba nkqu umthondo ugobile, intloko yomthondo igobela kwicala elinye.
Nangona zonke iinzame ezinokuthi zifike kwisiphelo esihle, ukuba ayizange iphumelele, inokwenzeka ukucaphuka okuninzi kunye nokurhawuzelela okukhulu kwindawo phambi komzamo onjalo.
Unyango lwe-frenulum emfutshane
Olona nyango lulungileyo nolusebenzayo lulo ungenelelo lotyando. Ayinangxaki enkulu kwaye iyakhawuleza, ilula kwaye kulula ukuyinyanga. Kuya kwenziwa phantsi kwe-anesthesia yendawo kunye nakwizigulana ezingalaliswanga, ngaphandle kokulaliswa esibhedlele. I-frenectomy ibandakanya ukwenza ukusikwa okuncinci okanye ukusikwa nge-scalpel kwindawo ye-frenulum, ukuze ingaphindi ivelise uxinzelelo kwithishu okanye kwesikhumba ebexhomekeke kuyo. Emva koko izibonda ezimbalwa ziya kusetyenziswa ngokusetyenziswa kwe-povidone iodine (i-antiseptic) kunye neengubo ezifakwe kwi-cream yokuphilisa. Ngengxaki ye phimosis ukusebenza kwahlukile, ekubeni lonke ulusu olujikeleze ijwabu lususwe ngokupheleleyo, lushiya intloko ye-glans ngokupheleleyo.
Kukho amadoda ukuba ingxaki ye-frenulum emfutshane ingasonjululwa kunye nemithambo yokuzolula. Ibandakanya ukwenza iintshukumo zokuhlehla kwesikhumba ngasemva kunye nokuqina kunye nokuphindaphinda. Kuya kwenziwa phantsi kweliso lonyango kwiiveki ezi-4-5 kunye noncedo lwe-corticosteroid-based cream ukunciphisa ukuvuvukala kunye nokunciphisa izicubu eziqinisiweyo. Ukuba olu nyango alusebenzi, kuya kufuneka kwenziwe utyando.
Iya kuba njani indaleko yayo?
Kubalulekile ukwenza uthotho lokhathalelo lwemihla ngemihla ekhaya ukuze ukuphilisa kuchanekile. Kufuneka sithintele usulelo ukuba lungenzeki kwaye ngenxa yoku Unyango lwemihla ngemihla luya kwenziwa, ukucoca indawo ngesepha kunye namanzi kwaye emva koko kugalelwe i-povidone iodine. Emva koko, iya kuphinda ihlanganiswe kunye neengubo kunye nekhilimu yayo ehambelanayo, ukuphulukiswa kakuhle kwaye ukuze kungabikho luhlobo lwengxabano.
Kunconywa ukuba ngexesha lonyango lokunyanga indoda kufuneka uthintele ama-erections, kuba ikwixesha lokuphiliswa kwaye ke inokuba buhlungu. Ukuziqhelanisa nokwabelana ngesondo kubalulekile ukulinda kancinane ngaphezu kweentsuku ezili-15, nangona kunjalo ngokufanelekileyo, ukuya kwiiveki ezine.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Amadoda aQinisekileyo » Ukunyamekela » Ungazi njani ukuba ndinefrenulum emfutshane